World Environment Day is the annual event for environmental action and takes place every5June around the world. This year, the World Environment Day annual theme is “Beat Air Pollution”.
MYTCL မှ ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနေ့ တွင် လှူဒါန်းခြင်း
ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနေ့အခမ်းအနားကို ကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များအတွက် နှစ်စဉ်ကျင်းပ လျက်ရှိပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံတွင် လည်း ဇွန်လ (၅)ရက်နေ့တိုင်းကျင်းပကြသည်။ ယခုနှစ်ကမ္ဘာ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရေ: နေ့နှစ်ပတ်လည် ဆောင်ပုဒ်မှာ “လေထုညစ်ညမ်းမှု တိုက်ဖျက်စို့” ဖြစ်ပါသည်။
၀၁၉ ခုနှစ် မေလ (၂၂)ရက်နေ့ (၁၄:၀၀) ခန့် တွင်ယင်းမာပင်မြို့နယ် ကျေးစာကျကျေးတွင် မီးလောင် မှုဖြစ်ပွား ခဲ့သည်။
The MYTCL CSD Team are actively engaged directly with community representatives in assisting both the direct and indirectly impacted villages in the area surrounding the mining activities.